Римлянам 2 CARS - Romafo 2 NA-TWI | Biblica
Римлянам 2 CARS - Romafo 2 NA-TWI
1Mo a mubu afoforo atɛn no, munni anoyi biara. Ɔkwan biara a mobɛfa so abu afoforo atɛn no, ɛnam saa kwan no ara so ma mode atemmu ba mo ho so. Efisɛ, bɔne a ɛma mubu afoforo atɛn no, mo nso moyɛ saa bɔne koro no ara bi. 2 Yenim sɛ, sɛ Onyankopɔn bu wɔn a wɔte saa ara no atɛn a na ne kwan so ara nen. 3 Na wo, m’adamfo, wo nso wubu afoforo atɛn wɔ nneɛma koro no ara a woyɛ bi no ho. Wususuw sɛ Onyankopɔn remmu wo atɛn anaa? Anaasɛ ebia, wummu n’ayamye, n’abodwokyɛre ne ne boasetɔ. 4 Ɛyɛ nokware sɛ wunim sɛ Onyankopɔn yɛ mmɔborɔhunufo. Efisɛ, ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ wo kwan a wobɛfa so anu wo ho.
NA-TWI : Romafo 2